लिदी पहिरो : मृत्यु हुने ११ जनाको सनाखत, बेपत्ताको खोजी जारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण ३१, २०७७ अनिश तिवारी
सिन्धुपाल्चोक — जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर–२, लिदी लामागाउँको पहिरोमा बेपत्ता भएकामध्ये ११ जनाको शबवफेला परेको छ । ११ जनाको शव शुक्रबार पहिरोले पुरिएको अवस्थामा फेला परेको र सनाखत भइसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी माधवप्रसाद काफ्लेका अनुसार मृत्यु हुनेहरुमा लिदी लामागाउँकी ३६ वर्षीया टिकामाया दोङ, १४ वर्षीय छिरिङ दोङ, ८० वर्षीय जिते झाक्री, ८ वर्षीय मिलन दोङ, ८ वर्षीय सानु दोङ, ७० वर्षीय जयबहादुर दोङ, ३० वर्षीय दावाल्हामु दोङ, ५ वर्षीया प्रिती दोङ, ५ महिनाकी कान्छी दोङ, ३४ वर्षीया धनमाया दोङ र ४ महिनाका रेमिश दोङ रहेका छन्।
बौद्ध परम्पराअनुसार मृतकहरुको सामूहिक रुपमा अन्येष्टिको तयारी गरिएको छ । बर्खाले सडक बगाएपछि एक्स्काभेटर लैजान नसकिँदा आहिले सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका ५५ जनाको टोली मिलेर साबेल, कोदालोको भरमा बाँकी २७ जना बेपत्ता खोजी गरिरहेको डीएसपी काफ्लेले जानकारी दिए ।
पहिरोमा पुरिएर घाइते भएका जुगल लिदीका ९ वर्षका रुपबहादुर दोङ,४३ वर्षकी जुनमाया दोङ, ६० वर्षकी केवरीङ दोङ र २३ वर्षका पासाङ दोङको चौतारास्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने ४५ वर्षकी यामुलामु दोङको काठमाडौंको बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको उनले जनाए । ‘सबैको अवस्था सामान्य भएको खबर आएको छ, अधिकाशंको टाउको र हातमा चोट लागेको छ,’ डीएसपी काफ्ले भने ।
पहिरोले विस्थापित लिदीका ३७ परिवारको तत्कालीन समस्यालाई टार्न पहल सुरु गरिएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुरोधमा गृह मन्त्रालयले हेलिकप्टरबाट ४० सेट त्रिपाल, भाँडाकुँडा, ब्ल्यांकेट, म्याट्रेस, डस्नालगायतका लत्ताकपडा सहयोग गरेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट पीडित ३७ परिवारलाई राहत दिइएको थियो ।
पीडित र मृतक परिवारलाई तत्कालका लागि खर्च दुई लाख रुपैयाँ घटनास्थलमा पुगेका गृहमन्त्री थापाले वितरण गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले जानकारी दिए । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, प्रदेश ३ का सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल, पर्यटन तथा वन मन्त्री अरुण नेपाल, सांसद सरेश नेपाललगायत पनि राहत सामग्री लिएर लिदीतर्फ लागेका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७७ १०:०६
नलीहाड फुकिरहेको डोजर
रोपाइँ गीतहरू हराउँदै–हराउँदै गए । डोजर झन्झन् सर्वशक्तिमान् हुन थाल्यो । विकासको पहेँलपुर अवतारले काँठका डाँडाकाँडा, भीरपाखाको कोखा, छाती र मुटुमा आक्रमण गर्न थाल्यो । प्लटिङका ज्यामितीय आकारप्रकार र रूपरेखामा काँठको जमिन बन्दी भयो । जमिन के, स्वयं काँठ बन्दी भयो ।
श्रावण ३१, २०७७ विनोदविक्रम केसी
तिम्रा घरमाथि छुचुन्द्राका ताँती पिँडालुको सेलामा टेकेको लट्ठी सर्प भइदेला दिन बिग्रेको बेलामा...
एउटै सांगीतिक सम्पदा थियो, काँठसँग । रोपाइँ गीत । त्यो पनि भूमाफियाले खाइदिए, जग्गा दलालले खाइदिए । खेतै नरहेपछि केको रोपाइँ ? अनि, केको रोपाइँ गीत ?
देशको माटो कि त राष्ट्रवादीहरूको कब्जामा छ, कि त जग्गा दलालहरूको । कवितैपिच्छे ‘देश दुखेको’ व्यथा कहने र श्रीसत्तासीनको भक्तिमा लीन हुने कविहरूका भागमा पनि दुईचार मुठी माटो होला । आजको माटो–सत्य यही हो । आजको कलबिख–सत्य यही हो ।
यहाँदेखि चार–पाँच अम्मलमाथि ‘बोल्ड’ र ‘इटालिक’ समेत गरिएको गीतको टुक्रो पंक्तिकारले तीन दशकअघि सुनेको हो । तथाकथित सुनौलो बाल्यकालको स्मृति होइन यो । मजस्ताको सुनौलो बाल्यकाल ? धूलाम्य र पत्थरमय थियो, त्यो त ।
अहिलेसम्म रोपाइँ गीतको त्यो एक फग्लेटो किन सम्झिरहेको छु भने ती रोपाहारको लामो आलाप मेरा कानले भुलेका छैनन् । कानको स्मृति कति जब्बर हुँदो रहेछ । कोही उत्पीडितको घाउको इतिहासजस्तो ! ती रोपाहारको अनुहार भुलिसकेँ । तर, ‘बे...ला...मा...’ भनेर तानेको लम्बेतान ध्वनि भुलेको छैन ।
त्यो ग्रामीण (काँठे) नारी गलाको आलाप किन अहिलेसम्म सम्झेको हो, त्यसको खास कारण छ । काठमाडौँको दक्षिणी भेगको काँठक्षेत्र चाल्नाखेल मेरो थातथलो हो । घरअगाडिको ठीकठीकै ठूलो फाँट जेठ–असार–साउनभरि घन्किरहन्थ्यो, रन्किरहन्थ्यो । रोपाहारका लामा–लामा आलापहरू गुन्जिरहन्थे । अलि–अलि बाउसेका स्वर पनि मिसिन्थे ।
त्यतिखेर काँठका फाँटहरू हराभरा हुन्थे । अहिले काँठका फाँटहरू ‘घराभरा’ छन्, घरैघरले भरिएका ।
खेत कम हुँदै गए, रोपाइँ घट्दै गए । रोपाइँ गीतहरू हराउँदै–हराउँदै गए । डोजर झन्झन् सर्वशक्तिमान् हुन थाल्यो । विकासको पहेँलपुर अवतारले काँठका डाँडाकाँडा, भीरपाखाको कोखा, छाती र मुटुमा आक्रमण गर्न थाल्यो । प्लटिङका ज्यामितीय आकारप्रकार र रूपरेखामा काँठको जमिन बन्दी भयो । जमिन के, स्वयं काँठ बन्दी भयो ।
भोगाइविद् र जिन्दगीशास्त्रीको हैसियतले मेरो दाबी छ– काँठमा बहुदलीय प्रजातन्त्र, डोजर, पुलाउ र ‘बक्स्योस् भाषा’ एकसाथ आए । डोजर, पुलाउ र बक्स्योस् भाषा काठमाडौँका पाखाभित्तामा त्यसअघि पनि आक्कलझुक्कल आए होलान्, तर जुन तीव्रतासँग आए, जसरी जनाउ दिने गरी आए, जति प्रभावशाली भएर आए, त्यसरी त छयालीस सालपछि नै आए । र, यो गीतांश मेरो मनमा यसरी बस्नुको खास कारण हो– मसँग सम्झनलाई अर्को कुनै मेरो ‘आफ्नो’ गीत थिएन, लय थिएन ।
काँठे महिलाका सारा दुःख र पीडाले (वन जाऊँ झम्टन्छ बाघले, घर बसूँ पोइले...) फाँटहरू बर्सात्मा थप भिज्दथे । मायाप्रेम हुन्थ्यो, सदाबहार ‘थिम’ । किशोरवयमा टेक्दानटेक्दै रोपाइँ गीतबाटै मैले जानेको थिएँ– वयस्क महिला र पुरुषका विशेष बात–संवाद हुन्छन्, राग–अनुराग हुन्छन्, स्थिति–मनस्थिति हुन्छन्, द्रुतता–तीव्रता हुन्छन्, संकेत–इसारा हुन्छन्, व्यंग्य–कटाक्ष हुन्छन् । त्यसैले तन्नेरी हुनु बडो मज्जाको कुरा हो । तर, हतार–हतार तन्नेरी हुन सकिन्न ।
तथापि, ती गीतमा फोहोरी जुहारी पनि हुन्थ्यो । कुनै बेलाको ‘सुन्ने ब्लू फिल्म’ झैँ लाग्ने दोहोरी गीतजस्तो । पुरुष हाकाहाकी नाठो बन्ने प्रस्ताव राख्थ्यो । महिला मुखभरिको जवाफ दिन्थी– ‘काशीमा गएर मुख धोएर आइजो ।’ यस्ता सस्ता संवाद पनि खुब सुनियो ।
दिन बिग्रेको गीत हठात् सम्झायो, यसपालिको असारले ।
असार २० गते खोकनाको दिन बिग्रेको थियो ।
सत्ताको मति बिग्रेपछि, नियत खराबिएपछि जनताको दिन अवश्य बिग्रन्छ ।
खोकनावासीको दिन बिग्रेको थियो ।
फास्ट ट्र्याक नामको ‘राष्ट्रिय गौरवको अजिंगर’ ले खोकनालाई खान आँटेको थियो, निल्न तम्तयार थियो । ललितपुरको प्राचीन नेवार बस्ती र सुप्रसिद्ध यो तेलग्राम इतिहासमा कृषि विद्रोहको कम्तीमा एउटा ‘फुटनोट’ हासिल गर्न गइरहेको थियो । किन यसो भनिरहेको छु भने मलाई न हिजोका इतिहासकारमाथि विश्वास छ, न आजका इतिहासकारमाथि विश्वास छ । यद्यपि, सत्यलाई सधैँ गुपचुप राख्न सकिन्न । त्यो इतिहासको लामो अध्याय भएर नआउला तर ‘फुटनोट’ मात्रै बनेर पनि टुप्लुक्क आउँछ । आउँछ, आउँछ ! मेरो दाबी छ । उही भोगाइविद् र जिन्दगीशास्त्रीको हैसियतले ।
विकासको आधुनिक मोडलमुताबिक जहीँतहीँ खन्न उद्यत, पेल्न उद्यत डोजरका दाँतीका निम्ति, ‘ब्लेड’ र ‘बकेट’ का निम्ति खोकनाको प्राचीनता, नेवार सम्पदा र सभ्यताले कुनै अर्थ राख्दैनन् । तर, खोकनावासीका निम्ति तिनको यति अर्थ छ कि तीबाहेक अरू निरर्थक छन् ।
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ, १३२ केभी प्रसारण लाइनलगायत ठूला आयोजना (राष्ट्रिय गौरव अनि दम्भका आयोजना) खोकना र बुङ्मतीको सयौं रोपनी उर्बर जमिन र सांस्कृतिक देहमा कुल्चेर सम्पन्न हुने दौडमा छन् । अनि, खेतका आली–आलीमा मौका छोप्नपुगेको छ, जग्गा दलाल र बिचौलियाको हूल । ‘जिरो प्वाइन्ट’ मा उनीहरूले भोलि जमिनको भाउमा थपिने मूल्यवान् जिरोहरूको हिसाबकिताब गरिसकेका छन् । उता, आफ्नो जमिन अँगालो मारेर पसारो परेका छन्, खोकनाका जन । किनभने, उनीहरूमाथि आफ्ना सम्पदा र संस्कृतिलाई जिरो हुनबाट जोगाउने अभिभारा छ ।
त्यो दिन पनि खुदोल फाँटमा प्रतीकात्मक विरोधस्वरूप रोपाइँ गर्न पुगेका थिए, खोकनाका सन्तान । आफूमाथि डोजर चढाए पनि उनीहरू हट्नेवाला थिएनन् । तिनलाई थाहा थियो– राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फत्ते गर्न हिँडेका डोजरका दाँतीहरूमा मान्छेका रगतका फाल्सा जमेका थिए, जमेका छन्, जम्नेछन् ।
मिलन, जमघट, अंकमाल र हातेमालोहरू वर्जित समयमा सयौँ खोकनावासी सआक्रोश, सअडान र ससंकल्प जम्मा भएका थिए, आफ्नो फाँटमा ।
रोपाइँ गरिछाड्ने आन्दोलनकारी थिए, खेतका गरा–गरामा ।
रोपाइँ गर्न नदिने सरकारी उर्दी लागू गराउन सशस्त्र प्रहरी पनि तयार थियो । र, झडप तय थियो ।
इतिहासमा सायद पहिलोपटक रोपाइँ बिथोल्न पुलिस फाँटमा पसेको थियो । रोपाइँ–आन्दोलनकारीमाथि बुट, लट्ठी बर्सिए । विरोधमा, प्रतिरोधमा खोकनावासीले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरे । प्रहरीले आँसुग्यास हान्यो । तेलग्राममा तैरिरहेको थियो, आँसुग्यासको पिरो गन्ध र बाफ । हिलोमा भेटिएका आँसुग्यासका सेलहरू पनि फुटनोटका रूपमै सही, इतिहासमा अंकित हुनेछन् । तिनले बताउनेछन् दुनियाँलाई (फुटनोटको जति औकात हुन्छ, त्यति नै स्वरमा, त्यति नै स्वराघातमा)– हातमा धानका बीउ लिएर उभिएका माटोका सन्तानमाथि कसरी भएको थियो दमन ?
खोकनालाई दुत्कार्ने विकासप्रेमीको जत्था पनि ठूलो छ । ह्यारी ट्र्युम्यानका सहस्र नेपाली अवतार तथा लघुरूपहरू कडा शब्दमा उसको भर्त्सना गरिरहेका छन् । आधुनिक विकास अवधारणाका जनक ट्र्युम्यान जसरी चाहन्थे अमेरिकाको अगुवाइमा अल्पविकसित दुनियाँको उन्नति (!) र प्रगति (!), त्यसरी नै नेपालको विकास चाहिएको छ, उनीहरूलाई । त्यसैले उनीहरू, विकासका धूवाँधार पक्षपाती, बिचौलिया र तिनका सरदार, खोकनालाई (मुखै छाडेर) गाली गरिरहेका छन्– ‘विकासविरोधी खोकना ! पटमूर्ख खोकना ! आदिम खोकना ! पछौटे खोकना ! असभ्य खोकना ! जंगली खोकना ! अल्पविकसित खोकना ! समृद्धिको तगारो खोकना ! अधिक मुआब्जाका लागि निहुँ खोजिरहेको खोकना !’
खोकना खासमा के खोजिरहेको छ, त्यो त ८१ वर्षीय नातिभाइ महर्जनलाई थाहा छ । खुदोल फाँटमा रोपाइँ–दमनको तीन–चार दिनपछि उनी हाम्रो टोलमा तेल लिएर आइपुगेका थिए । तेलग्रामका रैथाने नाति दाइ युगौँदेखि महिनामा एक–दुईचोटि यसरी नै हाम्रा घरआँगन आइपुग्छन् । चाल्नाखेल र खोकनालाई जोड्ने एउटा कडी भएका छन् । मैले जान्न चाहेँ– खोकना खासमा के खोजिरहेको छ ?
‘खोकना खोकनै रहन खोजिरहेको छ ।’ नाति दाइको जवाफ यत्ति थियो । जति थियो, पर्याप्त थियो ।
खोकनाले खोकनै रहन पाउनुपर्छ– खोकनाले खोजेको यत्ति हो, चाहेको यत्ति हो ।
म खोकनाको छिमेकी गाउँको मान्छे हुँ ।
बीचमा वाग्मती छ । सम्मुख छन्, चाल्नाखेल र खोकना । चाल्नाखेलको पशुपालनमा उहिले खोकनाको फाँटको भरथेग हुन्थ्यो । त्यहाँ पाइने ज्वाने घाँसले गाईभैंसीको दूध बढाउँछ भनिन्थ्यो । चाल्नाखेलका महिलाहरू लस्कर लागेर खोकना जान्थे, घाँस काट्न । फर्किंदा डोकाको हरियो क्याराभान फर्किन्थ्यो । घाँस काट्नेले एउटा संहिता पालन गर्नुपर्थ्यो, गहुँलगायत बालीनालीलाई हानि–नोक्सानी नपुर्‍याउने ।
खोकनाको सिकाली चौर थियो, चाल्नाखेलका फुटबल खेलाडी उत्पादन गर्ने । हामीलाई ग्रामीण गच्छेअनुसारका म्याराडोना, रोनाल्डो (पुरानो, ब्राजिली), रिभाल्डो सिकाली चौरले नै बनाएको थियो । सिकाली मन्दिर रहेको चौरमा दसैँको फूलपातीको दिन खोकना र बुङमतीका नेवारहरूको ठूलो जात्रा हुन्छ, विशाल भोज हुन्छ । नेवार व्यञ्जनको पहिलो परख मैले सिकाली चौरमा कुनै फूलपातीको दिन गरेको थिएँ ।
खोकनाको दिन बिग्रँदै गयो भने र प्रतिरोधमा जोड पुगेन भने सिकालीको शरीर र आत्मा फोरेर डोजर निस्कनेछ ।
दिन बिग्रेकै सन्दर्भमा २०७२ सालको भुइँचालो पनि आउँछ । खोकना अझै पनि कम्पनको वेदनाबाट तंग्रिसकेको छैन । त्यसमाथि अहिले ढुकिबसेको छ, डोजर, एक्स्काभेटर र ‘हेभी कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट’ को संहारक ताँती ।
बूढापाका सुनाउँथे, नब्बे सालको भुइँचालोमा चाल्नाखेल र खोकना विपद् हास्यमा अल्झेका थिए । खोकनाका घरहरू ढल्दा चलेको कुइरीमण्डल देख्दा चाल्नाखेल हाँस्थ्यो । अनि, चाल्नाखेलका घरहरू ढल्दा उडेको धूलो देखेर खोकना हाँस्थ्यो । दुवै खासमा आफ्नै दुःखमा हाँसेका थिए । एकअर्कैमाथि हाँसेका भए पनि त्यो अहानिकारक हाँसो थियो ।
म वाग्मतीपारि नजर हुत्याउँछु । भैँसेपाटीमुन्तिर फाँटमा राता छाना भएका सेता स–साना घरहरूको एउटा ‘कोलोनी’ बसेको छ । फास्ट ट्र्याक सम्पन्न गराउने जिम्मा यो बस्तीमाथि छ ।
यो कोलोनीले मलाई भारतीय लेखक अरुन्धती रोय सम्झाउँछ (‘कुल्चिएकाहरूकी मायालु ः बिलभेड अफ द डाउनट्रोडेन’ उपनाम दिन मन लाग्छ उनलाई) । उनको निबन्ध ‘द ग्रेटर कमन गुड’ सम्झाउँछ । निबन्धले भारतमा विशाल बाँधहरूले जनतामाथि गरेका बेहिसाब अत्याचार रबेहद शोषणको कथा भन्छ । सन् १९९९ मा ‘आउटलुक’ म्यागजिनमा प्रकाशित निबन्धमा त्यतिन्जेलसम्म भारतमा ३६ सय बाँधका कारण पाँच करोड मानिस विस्थापित भइसकेको आँकडा प्रस्तुत थियो । सन् १९६१ को हिउँदमा सरदार सरोवर बाँधको शिलान्यास गर्न गुजरात राज्यको कोठी गाउँ जाँदै थिए, प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू । उनको हेलिकप्टर बसाउनका लागि हेलिप्याड आवश्यक थियो । एक जना सरकारी अधिकृतले कोठीका बासिन्दासँग हेलिप्याड बनाउन अलिकति जग्गा मागे । थोरै पैसा दिए र कागज गराए । केही दिनपछि गाउँमा एउटा डोजर आइपुग्यो । लहलहाउँदो बालीलाई सोत्तर बनायो । हेलिप्याड बनाइयो । प्रधानमन्त्रीको हेलिकप्टर आयो । सुरक्षाकर्मीले घेरिएका नेहरूलाई गाउँलेले देख्न पाएनन् । उनले केही बेर भाषण गरे । त्यसपछि ‘बटन’ दबाए । नर्मदा नदीपारि ठूलो विस्फोट भयो । यसरी सरदार सरोवर बाँधको शिलान्यास भयो ।
अरुन्धतीले लेखेकी छन्, ‘त्यो बटन थिचेर आफूले इन्क्युबस नामक दैत्यलाई मुक्त गरिदिएको कुरा नेहरूले बुझे होलान् ?’
नेहरू गएपछि गुजरात सरकार दलबलसहित कोठी पुग्यो । छ गाउँका ९ सय ५० परिवारका हजारौँ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरियो । ती सबै टाड्वी आदिवासी थिए । उनीहरूलाई नगद क्षतिपूर्ति र रोजगारीको वाचा गरियो । गाउँमा डोजर र ट्रकको लर्को लाग्यो । बालीनाली सखाप पारियो । तीन वर्षपछि उनीहरूले तीन किस्तामा अत्यन्तै थोरै पैसा पाए, मुआब्जाका रूपमा । उनीहरूको जमिनमा केभाडिया कोलोनी खडा गरियो । जहाँ बाँधका पूर्वाधार सामग्री राखिए । इन्जिनियर र अन्य कर्मचारीका लागि घर, पाहुनाघर बनाइयो ।
भैँसेपाटीमुनिको कोलोनी देखेपछि दिमागमा केभाडिया कोलोनीको चित्र आउँछ । केही साझा तथ्य र केही समानता देखापर्छन्... विकास, प्रगति, उन्नति, जमिन, बालीनाली, मुआब्जा, दमन, डोजर, अनि डोजर र डोजर ।
डोजर आम काल्पनिकीमा कतिसम्म घुसिसकेको छ भने हाम्रो दैनन्दिन बोलीमा पनि यो स्थापित छ । जस्तो, मेरो यो निबन्धमा सम्पादकले ‘डोजर (च)लाइदिन’ सक्छन् र छोटोमा छोटो बनाइदिन सक्छन् । प्रेमिकासँग घुम्न जानका निम्ति बाउबाट पैसा फुत्काउन नसकेपछि छोरो भन्छ– ‘आजको रमाइलोमा बाउले डोजर लाइदिए ।’ न्यायालयले न्यायमाथि डोजर लाइदियो ।
दशकौँदेखि चलिरहेको छ, डोजर । हाम्रो भाषामा समेत घुलिइसकेको छ, डोजर । विनाश विम्ब, कसुर प्रतीकका रूपमा । यहाँनेर हेक्का गर्नु वाञ्छनीय छ, हाम्रा थुप्रै जनप्रतिनिधिसँग निजी डोजर छ । कैयन् गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरूको एक मात्र रट बाटो, बाटो र बाटो हुन्छ । किनभने, उनीहरू डोजरका स्वामी हुन्छन् ।
हरेक वर्ष पहिरो जान्छ । पहिरो जाने क्रम बढिरहन्छ । पर्यावरण, प्रकृति, भूबनोट जान्ने–बुझ्नेहरू भनिरहेका छन् : जथाभावी चल्ने डोजरले हरेक वर्षात्मा पहिरो निम्त्याइरहेका छन् । २०१३ सालमा बनेको त्रिभुवन राजपथले नेपालको विकास अवधारणामा ‘बाटो भनेकै विकास, विकास भनेकै बाटो’ को मन्त्र जडिदियो । अहिले पनि डोजरको सवारी चलाएर जहाँतहाँ, जथाभावी, पहरो फोरेर, थुम्को तोडेर, डाँडो भत्काएर बाटो खन्ने क्रम सतत् छ ।
र, पहिरो भएको छ, निरन्तर नियति । बाढी भएको छ, नियमित त्रासदी ।
हरेक वर्ष सङ्गीतले लेखेको र अञ्जानबाबुले गाएको विपद् गीत ‘चरी लैजा समाचार, हामी भयौँ बेघरबार’ अभिशप्त छ, ‘हिट’ हुन । डोजर ‘फ्लप’ नभएसम्म यो गीत हरेक वर्षात्मा चर्चित भइरहनेछ ।
र, वर्षात्मा लाखौँ चार्लीहरू रोइहिँड्न बाध्य हुनेछन् । (विख्यात हास्य कलाकार चार्ली च्याप्लिन झरीमा हिँड्न मन पराउँथे । उनको कथन थियो– ‘झरीमा रोएको कसैले देख्दैन । म निर्धक्क रोएर हिँड्न सक्छु ।’) झरीमा विभोर भएर रुझ्नेहरू कति होलान् र संसारमा ?
विकासका नाममा भइरहेका ध्वंसले लाखौँ–करोडौँ मान्छेले रोइहिँड्नुपर्ने प्रपञ्च उहिले नै रचिएको थियो ।
त्यो प्रपञ्च थियो– ‘डक्ट्रिन अफ डिस्कभरी’ अर्थात् खोजको सिद्धान्त ।
सन् १४९३ मा पोप अलेक्ज्यान्डर छैटौँले एउटा आदेश (पापल बुल) जारी गरेका थिए । क्रिस्टोफर कोलम्बसले पत्ता लगाएका आदिवासीका भूमि (मानौँ, भूमिको एउटै काम थियो, कोलम्बसका अगाडि फुत्त प्रकट हुने !) माथि स्पेनको अधिकार कायम गर्ने प्रबन्ध थियो, खोजको सिद्धान्त । पोपको आदेश थियो– ‘हालसम्म क्रिस्चियनहरूले पत्ता नलगाएको भूमि क्रिस्चियन शासकले हत्याउन सक्छन् । त्यहाँ शासन गर्न सक्छन् । सर्वत्र क्याथोलिक आस्था र क्रिस्चियन धर्म फैलिनु अपरिहार्य छ । बर्बर र असभ्य राष्ट्रहरूलाई क्याथोलिक आस्थामा आबद्ध गराइनेछ र तिनका आत्माको रक्षा गरिनेछ ।’ यसरी संसारले असभ्य, बर्बर, असंस्कृत र जंगलीलाई सभ्य र सुसंस्कृत बनाउने सिद्धान्त पायो । यो लुटको सिद्धान्त थियो । युरोपका साम्राज्यवादीहरूले अफ्रिका, उत्तर र दक्षिण अमेरिका, एसियाका असभ्य देशहरूलाई उपनिवेश बनाएर, लुट्नुसम्म लुटेर ‘सभ्य’ बनाइदिए । गुलाम बनाएर ‘सुसंस्कृत’ बनाइदिए ।
मिच्ने, किच्ने, पेल्ने, दमन गर्ने यो सिद्धान्तको आधुनिक अवतार डोजर हो । यो यस युगका क्रिस्टोफर कोलम्बसहरूको वाहन हो ।
डोजर हिंस्रक हुन्छ । डोजरले सम्पदाको बाँसुरी फुक्दैन । डोजरले संस्कृतिको धिमे बजाउँदैन । डोजरले त विकासको दुन्दुभि बजाउँछ । मान्छेको नलीहाड फुक्छ । कुनै ‘साइकोप्याथ’ हत्यारालाई कसैको कोखामा छुरी रोप्दा जुन आनन्द प्राप्त हुन्छ, डोजरलाई जमिनमा दाँती गाँड्दा त्यही आनन्द प्राप्त हुन्छ । सायद ।
जति–जति डोजरको चहलपहल हुन्छ, त्यति–त्यति भू–दलाल र बिचौलियाको सलबलाहट हुन्छ । आज काँठ क्षेत्रका हरेक चियापसलमा आना–रोपनी–लाख–करोडको गफ चलिरहेको हुन्छ ।
चियापसलदेखि सिंहदरबारसम्म चल्ने गफ आखिर यही भएको छ । गाउँदेखि सहरसम्म एक घर, एक दलाल नीति चलेझैँ लाग्छ । भूमि दलाल, स्त्रीको दलाल, जनशक्ति दलाल, विचार तथा सिद्धान्त दलाल, गरिबी निवारण तथा विकास दलाल, धर्म तथा आस्था दलाल र सबैभन्दा हानिकारक राजनीतिक दलाल... ।
यिनले अब घाम र जूनका बीचमा सेटिङ मिलाइदिएर तिनको उदाउने/अस्ताउने अवधि नै गोलमाल पार्देलान् भन्ने डर छ । हाम्रो लोकतन्त्रै बुट्टा भरेर कुरा गर्न जान्ने बिचौलियाको जञ्जालमा फसेको छ । दलाल र बिचौलियाले खान बाँकी जे छ, त्यसैको नाम देश हो भने अब तपाईं–हाम्रो देश बाँकी छैन । नूतन तीक्ष्ण नक्सापछिको प्रफुल्ल नेपालमा यसो भन्नु कति विरोधाभासपूर्ण हुन्छ !
यति त निर्दिष्ट छ– सत्ताको पनि दिन बिग्रिन्छ कुनै दिन ।
पाकिस्तानी जनकवि हबिब जालिबले संसारका सबै शासकका नाममा, भविष्यका शासकसमेतका नाममा, यी दुई पंक्ति यत्तिकै फुराएका होइनन् :
तुम से पहले वो जो इक शख्त यहाँ तख्त–नशीं था
उस को भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीं था ।
म घरको छतबाट यसो खोकनातिर दृष्टि पुर्‍याउँछु । नवनिर्मित श्वेत कोलोनीतिर आँखा अड्याउँछु ।
मलाई असारे भाकामा लामो आलाप तानेर जालिबको गजल गाउन मन लाग्छ— इतना ही...य...कीं...था ।
प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७७ १०:००